कांग्रेसको विधानअनुसार तोकिएको मितिमा महाधिवेशन भएको भए २०७६ फागुनमा १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर, वैधानिक मितिभन्दा दुई वर्ष पर पुग्दा पनि कांग्रेसको महाधिवेशन निश्चित हुन सकेको छैन ।
पाँचौपटक सारेर मंसिर ९ देखि १३ सम्म कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि अब त्यो मितिमा महाधिवेशन नुहने निश्चित भएको छ ।
दशैं अगाडिबाट रोकिएको महाधिवेशन प्रक्रिया छठअगाडि गति लिने सम्भावना छैन ।
१४ औं महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको निर्वाचन कार्यतालिका भद्रगोल भएको छ । यसलाई सच्याउनका लागि कांग्रेसको कुनै पनि तहको बैठक बस्न सकेको छैन ।
त्यसमाथि आगामी शुक्रबार पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यसलगत्तै तिहार र छठ पर्व संघारमा छ । त्यसबेला महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छैन ।
मंसिरमा हुने महाधिवेशनको लागि कांग्रेसले कार्यतालिका प्रकाशन गरेर निर्वाचन कमिटीलाई दिएको थियो । त्यसअनुसार, भदौ १८ गते देशभर वडा तहको अधिवेशन गर्ने भनेको थियो ।
त्यसैगरी गाउँ तथा नगर अधिवेशन २७ भदौमा गर्ने भनिएको थियो । त्यसअघि गाउँ तथा नगर अधिवेशन साउनमै गर्ने तय थियो । त्यसपछि, क्षेत्रीय अधिवेशन र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोजमा तोकिएको थियो ।
यसैगरी, जिल्ला अधिवेशन पनि असोजमा गर्ने भनिएको थियो । प्रतिनिधि सभाको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन ५ असोजमा तोकिएको थियो ।
त्यस्तै, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा १० असोजमा जिल्ला अधिवेशन हुने भनिएको थियो । नयाँ तालिका अनुसार, प्रदेश अधिवेशन १० देखि १२ कात्तिकका लागि तोकिएको थियो ।
तर, यो कार्यतालिका पूरै प्रभावित भएको छ । कांग्रेसले अझै प्रदेश–२ का आठ र पहाडी क्षेत्रका बाँके, कैलाली, डोल्पा, सुर्खेत र रसुवा गरी १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन नै गर्न सकेको छैन । त्यसमध्ये, तीन जिल्ला बारा, रौतहट र रसुवाको क्रियाशील सदस्यता विवाद नै टुंगिन सकेको छैन ।
कार्यतालिका अनुसार १० असोजमा नै जिल्ला अधिवेशन सकिनुपर्थ्यो । तर, अहिलेसम्म जम्मा १३ वटा जिल्लामा मात्रै जिल्ला अधिवेशन सकिएको छ । अहिले कांग्रेसमा महाधिवेशनको सबै प्रक्रिया ठप्प छ ।
दशैं अगाडिबाट रोकिएको कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया छठ पर्वअगाडि शुरू हुने अवस्था छैन । नेता तथा कार्यकर्ताहरू पर्वको मूडमा रहेकाले महाधिवेशन प्रभावित भएको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेस महामन्त्री शेखर कोइरालाले आइतबार चितवन पुगेर महाधिवेशनको रोकिएको प्रक्रिया तिहारलगत्तै शुरू हुने बताएका छन् ।
तिहारपछि जिल्ला अधिवेशन गरेर कांग्रेसले मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने सम्भावना छैन । तसर्थ, कांग्रेसको महाधिवेशन फेरि सर्ने निश्चित भएको छ ।
यसरी पाँचपटक सारियो महाधिवेशन
कांग्रेसको वैधानिक व्यवस्था अनुसार, २०७६ फागुनमा १४ औं महाधिवेशन हुनुपर्दथ्यो । त्यसको चार वर्ष अगाडि २०७२ फागुनमा कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशन गरेको थियो । त्यही महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको केन्द्रीय कमाण्ड सम्हालेका थिए ।
तर, विशेष कारणवश महाधिवेशन गर्न नसकिएको भनेर २०७६ पुसमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्‍यो र २०७७ फागुन ७ को लागि महाधिवेशनको मिति तोकियो ।
त्यसबीचमा महाधिवेशन तयारीको कुनै काम कांग्रेसले गरेन । पार्टीमा क्रियाशील सदस्यता विवाद थियो । त्यसको निरूपणमा पनि कांग्रेसले ध्यान दिएर काम गरेन ।
२०७६ माघमा नेपालमा पहिलोपटक देखिएको कोराना संक्रमणको असरले २०७७ सालभर नै देशलाई आक्रान्त पार्‍यो । त्यसबेला कांग्रेसलाई महाधिवेशन सार्ने गतिलो बहाना बन्यो– महामारीको बीचमा महाधिवेशन गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क ।
त्यसपछि केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ६ महिना थपियो र २०७८ भदौ १८ मा १४ औं महाधिवेशन गर्ने भनियो । २०७८ भदौसम्ममा महाधिवेशन नगर्दा कानूनले कांग्रेस पार्टीलाई चिन्दैनथ्यो ।
भदौमा महाधिवेशन नगर्ने हो भने संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) उल्लंघन हुन्थ्यो र कांग्रेसको वैधानिकता सकिन्थ्यो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर कांग्रेसले भदौमा महाधिवेशन तय गरेको थियो ।
तर, त्यो मितिमा पनि कांग्रेसको महाधिवेशन जुरेन । देशभरको क्रियाशील सदस्यता विवाद भदौमा तोकिएको मितिका लागि बाधक बन्यो । कांग्रेसले कानूनी संकट टार्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्‍यो ।
आयोगले भदौमै वडा तहको महाधिवेशन शुरू गरेर पुससम्ममा राष्ट्रिय महाधिवेशन सक्न सहमति दिएपछि कांग्रेसले फेरि महाधिवेशन सारेर मंसिरको ९ देखि १३ सम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
के छ तयारी ?
महाधिवेशनको प्रक्रिया रोकिएपछि कांग्रेसका नेताहरू छलफलमै जुट्न सकेका छैनन् ।
असोज अन्तिममा आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएपछि कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा देश दौडाहामा व्यस्त छन् ।
कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत केही दिनअघि भारत भ्रमणमा थिए । लगत्तै संस्थापन इतर समूहमा रहेका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला भारत भ्रमणमा गएका छन् । दशैंको अवसरमा जिल्लामा गएका नेताहरू काठमाडौं फर्किन नसकेको हुँदा पनि छलफलका लागि जुट्न नसकेको संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले बताए ।
महाधिवेशनको प्रक्रिया रोकिएको बारे छलफल गर्न संस्थापन इतर समूहले आजै बैठक राख्ने तयारी गरेको थियो । तर, सबै नेता काठमाडौंमा नभएको कारण भोलि बस्ने तयारी गरिएको एक नेताले बताए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं संस्थापनइतर समूहमा रहेका नेता अजुर्ननरसिंह केसी तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘तोकिएको मितिमा नै महाधिवेशन हुनुपर्छ । त्यसमा कुनै कारण देखाएर सार्नु लज्जास्पद हुन्छ । पार्टी नेतृत्वले ५/६ पटक महाधिवेशनको मिति सारिसक्यो । फेरि सार्दा त्यसमा नेतृत्वको शिथिलता र कमजोरी देखिन्छ, त्यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन’, केसीले भने । महाधिवेशनको प्रक्रिया रोकिएको ठाउँमा प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी संस्थापन पक्षकै भएको केसीको तर्क छ ।
‘चार वर्षभित्र अविधेशन हुनुपर्दथ्यो । नसक्दा विशेष कारणवश हुन नसक्ने हो । तर, त्यस्तो के विशेष कारण आइपर्‍यो भन्ने जस्टिफिकेसन कहीँ छैन । हुनुपर्ने मितिबाट दुई वर्ष पर आउँदा पनि महाधिवेशन हुन नसक्नु नेतृत्वका लागि लज्जाजनक विषय हो’, केसीले भने ।
केन्द्रीय सदस्य खतिवडा भने तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भएकाले चाँडै छलफलमा बसेर निर्णय गरिने बताउँछन् । ‘सभापति एवं प्रधानमन्त्री केही दिनमा बेलायत जाँदै हुनुहुन्छ । लगत्तै तिहार आइसकेको छ । त्यसपछि छठ छ, अनि मात्रै छलफल होला’, खतिवडाले भने ।
कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरूराज घिमिरे पनि मंसिर ९ मा महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको बताउँछन् ।
‘मंसिर ९ मा त महाधिवेशन हुँदै हुँदैन । तर, महाधिवेशन नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफलको तयारी गरेका छौं’, घिमिरेले भने ।
निर्वाचनसम्म महाधिवेशन धकेल्ने देउवाको प्रयास
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म महाधिवेशनलाई धकेल्ने विकल्पको खोजीमा रहेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।
देउवाले महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा दोहिरिने तयारी गरेको भए पनि वडा र पालिका तहको प्रारम्भिक नतिजा देउवाको पक्षमा देखिएको छैन । त्यही अवस्था महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिदाँसम्म रह्यो भने पार्टी कमाण्डमा दोहोरिने देउवाको चाहना अधुरो रहन्छ । अझ, देउवाकै विश्वासिला सहयोगी विमलेन्द्र निधि उनलाई छाडेर सभापति बन्ने दौडमा लागेका छन् ।
सभापतिमा दोहोरिन सजिलो बाटो नदेखेका देउवाले महाधिवेशनलाई निर्वाचनसम्म धकेल्न सके आगामी चुनावमा टिकट बाँड्नेदेखि फेरि प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिनेसम्मको सपना देखेका हुनसक्छन् । त्यही कारण उनले महाधिवेशनमा ध्यान नदिएको हुन सक्ने कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस नेता गुरूराज घिमिरेले व्यक्त गरेको महाधिवेशन नै नहुने हो कि भन्ने आशंकाले पनि देउवाको यो अभिष्टलाई संकेत गर्छ । घिमिरे कांग्रेसमा संस्थापन इतर समूहमा छन् ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य केसी भन्छन्, ‘उहाँको इच्छा त आफैँले हालीमुहाली गरेर टिकट बाँड्ने, पहिलेजस्तै मनपरी गरेर पार्टीलाई भद्रगोल र धरासायी बनाउने हुनसक्छ । तर, वैधानिक अस्तित्व नै सकिएको केन्द्रीय कमिटी धेरै दिन रहनुहुँदैन । यो कामचलाउ मात्रै हो । अधिवेशनबाट चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिस्थापन गरिहाल्नुपर्छ ।’
संस्थापन पक्षकै नेता खतिवडा कांग्रेसको महाधिवेशन भन्दा अगाडि संसदीय निर्वाचन भए कांग्रेसलाई भन्दा बढी फाइदा देशलाई हुने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पहिला संसदीय निर्वाचन र त्यसपछि कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने हो भने कांग्रेसलाई भन्दा देशलाई बढी फाइदा हुन्थ्यो । यो चाहना कसको हो त्यो पूरा भइदिए हुन्थ्यो । देशलाई हंग पार्लियामेन्टमा राखेर तानातान गरेर टालाटुली बटुली गरेर धेरै दिन चलाउने अवस्था छैन ।’
स्थानीय चुनावभन्दा पहिला संसदीय चुनाव हुनुपर्ने उनको मत छ ।
कांग्रेस संस्थापन इतर समूह भने संस्थापन पक्षलाई दबाब दिएरै भए पनि चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशन गराउने पक्षमा देखिएको छ ।